🙏 ❝❝ ထူးမြတ်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွယ်တော်ဖူးမြှော်ဖို့ August လ ဟိုတယ်တည်း ခရီးစဉ် ❞❞ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Classifieds, Personal Ad. » 🙏 ❝❝ ထူးမြတ်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွယ်တော်ဖူးမြှော်ဖို့ August လ ဟိုတယ်တည်း ခရီးစဉ် ❞❞	3
🙏 ❝❝ ထူးမြတ်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွယ်တော်ဖူးမြှော်ဖို့ August လ ဟိုတယ်တည်း ခရီးစဉ် ❞❞
Posted by သျှားသက်မာန် on Jul 6, 2016 in Classifieds, Personal Ad., Travel |3comments
🙏 ❝❝ ထူးမြတ်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွယ်တော်ဖူးမြှော်ဖို့ August လ ဟိုတယ်တည်း ခရီးစဉ် ❞❞ 🙏
📅📅 ❝❝ ခရီးစဉ် ထွက်ခွာမည့်ကာလ ❞❞ 📅📅
(10 Augus 2016 to 18 August 2016 ) အတွင်း
💵💵 ❝❝ ခရီးစဉ်အတွက်ကုန်ကျငွေ❞❞ – $ 1250 💵💵
⏳⏳⏳ ❝❝ခရီးစဉ်ကြာမြင့်ချိန် – ၅ ညအိပ်/ ၆ ရက်❞❞ ⏳⏳⏳
ရန်ကုန် –✈ ဘန်ကောက် –✈ ကိုလံဘို ( အသွားအပြန် လက်မှတ်)
ကျွန်းမြတ် သီဟိုဠ် ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ် ရလောက်အောင် တောတောင်ရေမြေ သဘာဝ အလှအပများဖြင့်၊ အေးချမ်းသာယာ ပြီး ဗုဒ္ဓ ဘာသာ သာသနာ ထွန်းကားရာ သီရိလကာင်္ ကျွန်းနိုင်ငံတို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ဖူးမြော်ဖို့ တစ်ခါတခေါက်တော့ အရောက်သွားရန် တိုက်တွန်းအကြံပြုပါရစေနော်…….
သီရိလကာင်္နိုင်ငံတို့ ရှိ မရောက်မဖြစ်သော နေရာများဖြစ်ရာ မြတ်စွာဘုရား၏ လက်ဝဲအောက်စွယ်တော်မြတ်နှင့် သီရိမဟာဗောဓိပင် (ဒက္ခိဏသာခါ လက်ယာကိုင်းတော်)၊ အဘယမုနိ၊ ကလျဏီ၊ မဟိန္တလေ့ အား သွားရောက်ဖူးမြော် ပူဇော် လည်ပတ်ကြပါမည်။
📌📌” ဖူးမြော်ပူဇော် မည့် နေရာများ ထဲမှ နေရာတစ်ချို့ ကို အကျဉ်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် “📌📌
🌟 အေးချမ်းသာယာလှသည့် ကန္ဒီမြို့နှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လက်ဝဲအောက် စွယ်တော်မြတ် နှင့် ကိန်းဝပ်စံပါယ်တော်မူရာ စွယ်တော်တိုက်။
🌟သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သို့ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ စတင်ရောက်ရှိခဲ့ရာ မဟိန္ဒလေတောင်
🌟 သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးဂူ ဒမ္ဘူလ
🌟 Polonnaruwa ဘုရင် တည်ခဲ့တော် ရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်သော Polonnaruwa
🌟 200 မီတာကျော်မြင့်မားသည့် ကျောက်တောင်ပေါ်တွင် နန်းတော်တည်ခဲ့သည့် စီဂရိယမြို့
🌟 UNESCO ၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များစာရင်းဝင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ ရှေးဟောင်းမြို့တော် အနုရာဓပူရရှိ ရှေးဟောင်းလက်ရာ စေတီ၊ ပုထိုးများ
🌟 ကိုလံဘိုမြို့ရှိ ကလျာဏီစေတီတော်၊ ရုပ်စုံဗုဒ္ဓကျောင်းတော်ကြီး နှင့် ဈေးဝယ်ယူနိုင်မည့် Shopping Mall များ
🌟 သဘာဝတရား၏ လှပမှုများကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တောင်ပေါ်မြို့လေးဖြစ်သည့် လက်ဖက်စိုက်ခင်းများဖြင့်ကျော်ကြားသော နုဝရဧလိယ
🌟 စတုတ္ထသံဃာယနာ တင်တော်မူခဲ့ရာ အာလုဝိဟာရလိုဏ်ဂူတော်
အစရှိသည် နေရာများ အပြင် နာမည်ကြီး၍ သွားသင့်သော နေရာများပါ သွားရောက်လည်ပတ် ဖူးမျော်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖူးရခဲလှသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်အား ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားရောက်ဖူးမြော်ဖို့ Wings မှ စေတနာ မေတ္တာ အပြည့်ဖြင့် တိုက်တွန်း နိုးဆော် လိုက်ပါတယ်နော်…..
😊” ခရီးစဉ်တွင်ပါဝန်သည့် ၀န်ဆောင်မူများ ”😊
– လေယာဉ်လက်မှတ် အသွားအပြန်
– ‘ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ
ခရီးစဉ်တလျှောက် (နံနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညစာ၊ ဒေသထွက်အစားအစာများ ၊ ရာသီပေါ်အသီးအနှံများ
အဆင့်မြင့်3Star ဟိုတယ်
🛂 ၀င်ကြေးများ။ 🛂
– ခရီးဆောင်အိတ်အကြီး (1)လုံး၊ တဘက် (အဖြူ)၊ ဦးထုပ်၊ သွားတိုက်ဆေး၊ သွားပွတ်တံ၊ ဆပ်ပြာ၊ စနိုးတာဝါ
ခရီးစဉ် အစအဆုံးကို Company မှ Tour Leader အပါအဝင် English Guide မှ လိုက်ပါဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း…..
အစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အတူ လိုလေသေးမရှိ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် ခရီးသွားမိဘပြည်သူများ Wings နှင့်အတူ လိုက်ပါကုသိုလ်ပြုနိုင်ရန် အတွက် ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ…………
ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ကို သိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက ခရီးစဉ်အသေးစိတ်နှင့် သိရှိလိုသည်များကို လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံရှင်းလင်းပေးခြင်း ခရီးစဉ် အစီအစဉ်စာရွက်များကို အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
🎆Wings International Travel & Tours🎆
👉 No.(180), Ground Floor, U Chit Maung Rd,( ရန်ကင်းဈေးကွေ့ မှတ်တိုင်) ၊ Bahan Tsp, Yangon.
📱09 78 2220 683
Comment နှင့် Message box များတွင်လည်း လူကြီးမင်းတို့ ဖုန်းနံပါတ် ချန်ထားနိုင်ပြီ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ကာ ခရီးစဉ်အား အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးပါမည်။
Shar Thet Man has written 157 post in this Website..
Thint Aye Yeik says: ထီပေါက်ရင်
သို့မဟုတ် တခြားမိတ်ဆွေတွေ သွားချင်ရင်
အောင် မိုးသူ says: ဘုရားဖူးကိုတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမသွားချင်သေး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းက ဘုရားတွေတောင် စုံအောင် မဖူးနိုင်သေးလို့။
သျှားသက်မာန် says: ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်သွယ်လိုက်ပါ…………….ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းဖူးလို့စုံအောင်လည်းစီစဉ်ပေးပါတယ်